फोडेनको कीर्तिमानी गोलसंगै सिटी उक्लियो !! स्पर्सको सुधार तर बदाला रोकिएन - Experience Best News from Nepal
फोडेनको कीर्तिमानी गोलसंगै सिटी उक्लियो !! स्पर्सको सुधार तर बदाला रोकिएन
च्याम्पियन लिग क्वाटरफाइनल प्रतिद्वन्दी म्यानचेस्टर सिटी र टोटनह्याम हट्सपुर् पुन आज प्रिमिएर लिग अन्तर्गतको खेलमा भिडेका थिए । अग्र स्थानका निम्ति सिटी भिड्दै थियो भने स्पर्सले अन्तिम ४ का निमित स्थापित रहन खेलेको थियो ।
खेलको पहिलो हाफको ५ औ मिनेटमा नै सिटीका फिल फोडेनले सिटीका निम्ति अग्रता दिलाएका थिए । म्यानचेस्टर सिटीका निम्ति गोल गर्दै फोडेनले किर्तिमान बनाएका छन् । उनि सिटीका तर्फबाट २००० यता जन्मिएर पहिलो सिटीका निम्ति गोल गर्ने खेलाडी बनेका हुन् । यसका साथै उनि पूर्ण प्रतिस्पर्धाका तेश्रो कम उमेरका खेलाडीको सुचीमा समेत परेका छन्, १८ बर्ष ३२७ दिन !
सिटीको घरेलु मैदानमा भएको उक्त खेलमा सिटीले पूर्ण खेल पहलो हाफ आफ्नो बसमा पारेको थियो, स्पर्सका निम्ति भने पजिलो हाफमा कुनै गोल हुन सकेन ।
पहिलो हाफको गोल फाइदा लिएको सिटीको दोश्रो हाफ भने केहि खस्किएको देखियो । अट्याक रोक्न सक्षम स्पर्स पुन खेल सुधारको शैलीलाई निरन्तरता दिएको ठहरियो । साने, स्टर्लिंग शिल्भाको जोड रोक्न सफल स्पर्सले आफ्नो अट्याक भने बढाउन सकेन ।
दोश्रो हाफमा निकै बदला पूर्ण खेल देखिएको थियो विभिन्न खेलाडीले पहेलो कार्ड समेत प्राप्त गरे । साथै दोश्रो हाफ बिना गोल सकियो र खेल सिटीले १-० ले आफ्नो हातमा पार्यो ।
आजको जितसंगै सिटी पुन प्रिमिएर लिगको शिर्ष स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । सिटीले ३४ खेल खेल्दै ८६ अंक बटुलेको छ भने लिभरपूल ८५ अंकको साथ् दोस्रो स्थानमा छ स्पर्स हारको कारण ६७ अंक मै सिमित रहन पुगेको छ ।
टाइटलका निम्ति सिटी मात्र एक जित टाढा !! कम्पनीको सनसनीपूर्ण गोलले ड्रबाट जोगियो सिटी
टाइटल जित्ने होडबाजीबाट टाडियो सिटी !! लिभरपूलको सम्भावना बढ्यो
खेलाडी अनुबन्धका निम्ति सिटीले खर्चिदै छ २०० मिलियन !! को को परे सिटीको अनुबन्धको नजरमा
१८ वर्षकै उमेरमा बाबु बने म्यान्चेस्टर सिटीका यी स्टार खेलाडी !!
प्रिमिएर लिगमा नयाँ प्रशिक्षकको पहिलो हार